VTTFM: Hametraka rafi-pintantanana mangarahara | Madatopinfo
58 taona katroka nahazoana ny fahaleovantena i Madagasikara amin’izao, mbola mahantra ny mponina ao aminy. Na dia voalaza ary fa ny 60 isanjato ny Malagasy dia tantsaha avokoa. Miisa 25 tapitrisa ny mponina, manana vina entina ho amin’ny fampandrosoana maharitra ny kandida Arlette Ramaroson manoloana izany: “hamelona ny Malagasy izay efa rendrika izahay. Hijery manokana ireo tena maharary ny vahoaka, na ara-tsosialy izany na koa ny tontolon’ny toe-karena”.
Ho foana avokoa ireo kolikoly sy fitiavan-tena rehefa tonga ny fotoana, hoy hatrany ity kandida atolotry ny VTTFM (Vondrona Tia Tanindrazana ho an’ny Fanorenana an’i Madagasikara) ity. Aminy, laharam-pahamehana ny hamerenana ny vidin’ny harena sarobidy mankany amin’ny vahoaka, hampitombo ny tahan’ny fari-piainan’ny tsirairay ary mijanona daholo ihany koa ny fanaovana ampihimamba sy tsindry hazolena. Fifanarahana hitondra tombotsoa ho an’ny olompirenena rehetra no katsahin’ity kandida ity mba ahafahan’ny olona hisitraka ny harena.
Fahefana avy amin’ny vahoaka
Ny VTTFM dia manana vina ny hanova ny rafi-pitondrana hatrany ifotony. Araka ny hevitry ny kandida atolotr’ity antoko politika ity, «avy amin’ny vahoaka ny fahefana,ary avy aminy koa no hipoitra ny Antenimieram-pokonolona, hitsangana ny Faritany mizaka tena mba hampirindra ny fiaraha-monina». Hisy ihany koa noho izany ny fifandanjana ara-drariny ny rafitra rehetra. Olompirenena sahy milaza ampahibemaso ny fanovana ny ambaratongam-pahefana hitsinjovana ny filàn’ny mponina ao aminy Ramatoa Arlette Ramaroson. Nohamafisiny hatrany fa natao hanompo vahoaka ny mpitondra, ka tsy vaindohan-draharaha ny fizarana fiara mataho-dalana ny Ministra sy ny Solombavambahoaka. Vonona ny hametraka fitantantanana mangarahara eto Madagasikara ny tenany sy ny Antoko politika tarihiny.